Disemba, 2018 innovations, Microstation-Bentley
Anyị anaghị ere ngwá ọrụ, anyị na-ere nsonaazụ ngwanrọ. Ndị mmadụ adịghị akwụ anyị ụgwọ maka ngwanrọ ahụ, ha na-akwụ anyị ụgwọ maka ihe ha mere
Ọganihu Bentley abanyewo site na ngwa ahia. Abụọ nke afọ a bụ ndị Britain. Njikwa; atụmatụ atụmatụ, na Legion; ìgwè mmadụ na usoro ihe omume ndị na-agagharị agagharị, bụ ndị a maara ma na-asọpụrụ na United Kingdom. Njikọ ya na atụmatụ Bentley na usoro njikwa ihe onwunwe ga-eme ka ojiji ya gbasaa ma wetara ndị ha debanyere aha ngwa ngwa. Bentley na-amịpụta ụfọdụ ngwaahịa; 2019 ga-ahụ nkedo nke iTwin Ọrụ nke na-achọ imepụta echiche nke "Twin Twin", nke bụ ihe njedebe nke okike nke Ịgba Nhazi Ozi (BIM), na iModel.js na-emepe emeghe nke ga-eri ya. Kedu ihe ahụ? Isi oghe? Ànyị na-atụ anya ka anyị kwenye na ihe anyị na-apụghị ịhụ ma ghara ịzụta ga-enye ego maka ndị mmepe ya? Kọwaa nke ahụ.
Ndi ahia Bentley enwere ubochi a, nke kachasi gi obi uto?
Ana m enwe mmetụta dị mfe banyere ọtụtụ ihe, mana ịnọdụ ala ma na-ele anya n'azụ ihe ndị mmadụ na-eme ugbu a na ngwanrọ anyị bụ ihe na-echebara echiche. Enwere ikike nwere ike ime ka ngwakọta a dị na onyinye onyinye ngwaahịa anyị. M na-ahụ mmasị na Synchro mere nnukwu ọdịiche maka ndị ọrụ. Ihe ndị mmadụ na-ekwu maka Legion masịrị m. Eche m na onye ọ bụla kwesịrị iji Legion!
Na United Kingdom, ugbu a, anyị nwere Kọmitii Na-ahụ Maka Ozi na Gọọmentị. Kedu ihe bụ banyere data ndị na-eme ka gọọmentị ghọta uru ọ bara?
Echiche nke ịga dijitalụ amalitewala. Ndị mmadụ na-amalite ịchọpụta na ọ bụrụ na ozi dị n'ebe ahụ, a ga-erigbu ya ma jiri ya mee ihe dịka o kwere mee. Naanị ịdị adị nke data ziri ezi na oge kwesịrị ekwesị na-enwekwu ọchịchọ. Omume ahụ ga-aga n'ihu. Ndị mmadụ ga-achọ ịnweta ohere karịa na ozi oge na yana ihe ndị ọzọ.
Kedu ihe a na-eche na ọ bụ n'azụ akwukwọ iModel.js?
Anyị mụtara na ozi echekwara na faịlụ ndị metụtara ngwa anyị ji arụ ọrụ nwere ike ịbụ metụtara ozi sitere na ọtụtụ mpụga ndị ọzọ; GIS, nkewa, akụrụngwa na usoro okporo ụzọ, dịka ọmụmaatụ. Na anyị maara na e nwere oku maka mma ihe nsuso na ndị ọzọ dị iche iche nke ndụ akuko. Ya mere o yiri ka ọ bụ ihe okike iji kwekọọ n'echiche nke ụzọ na atụmatụ nke ụzọ a na nke kachasị nso n'okporo ụzọ. Ndị mmadụ nwere ahụmịhe kwa ụbọchị na iji ngwa maka ụdị ozi a, ha enweghị ike ịghọta ihe kpatara ọ ga - eji sie ike. Anyị kwesịrị ịrụ ọrụ na ịme njikọ ndị ahụ ka ọ dị mfe dịka anyị nwere ike.
Enwere otutu okwu banyere "ihe gbara ọkpụrụkpụ", gịnị bụ nke ahụ n'ezie?
Na ntaninya ugbua, a kwadoro ngwa obula iji dozie nsogbu di nkpa, ma otutu n'ime ha bu ime ime afo gara aga. Ha na-echekwa data ha n'ụzọ na-enweta ngwa ngwa site na ngwa edezi. Imirikiti oge - na m na-ekwu okwu maka ngwa nke aka anyị - mgbagha dị ka nghọta na ozi ahụ dị na ngwa, ọ bụghị na faịlụ ahụ. The faịlụ bụ naanị usoro nke bytes na mgbe ị na-agbalị ịghọta ya na-enweghị ngwa, ọ bụ incoherent. Ọchịchịrị bụ na ngwa ndị ọzọ apụghị ịkọwa ya ma jiri anya nke uche hụ ya n'ụzọ zuru oke.
Anyị na-ama ikpe maka ịmepụta ọnọdụ a dị ka onye ọ bụla. Ma ala nke ụwa ugbu a bụ na anyị nwere ọtụtụ ọnụọgụ ngwa ndị dị mkpa maka ịmepụta mkpokọta nke nchịkọta faịlụ onwe. Ọ dịghị onye ga-emeli ya. Anyị nwere data ma ha bara uru, ma anyị na-emebi ha.
Isi oghere bụ nnukwu ihe ịga n'ihu maka Bentley, gịnị mere ugbu a?
Anọ m na-akwado nke a ruo ogologo oge, ma ị pụghị ịmepee koodu koodu ahụ dị na ọdọ mmiri. Ọ bụrụ na anyị mepee emeghe oghere na ngwa anyị afọ ole na ole gara aga, usoro iwu ahụ ga-abụrịrị ihe mgbagwoju anya. Naanị ịkọwa otú o si arụ ọrụ dị n'okpuru ikike nke onye na - ahụ ihe na - ahụ anya - naanị ihe ndị na - emeghe emepe na - emepe emepe bụ ihe ndị na - ahụ anya nwere ike ime. Eleghi anya onye na-ekiri ihe na-adịghị anya agbanwe agbanwe ihe ọ bụla ugbu a, mana ha bụ ihe kpatara isi mmalite - ọ bụ n'ihi na ndị mmadụ nwere ike iji ya maka ihe ndị na-abụghị maka.
Anyị anaghị atụ anya na ọ bụ naanị na ọ dị, na ndị mmadụ na-eji ya. Anyị ga-arụsi ọrụ ike iji gosipụta na iji iModel.js bara uru ego na oge.
Ndi ama okosobode ndutụhọ ke Bentley ke ebiet emi enye osụhọde?
Mma! Enwere ike siri ike na Bentley Systems kwuru na ọ bụ ihe dị egwu. Anyị bụ ụlọ ọrụ software. Anyị na-ere ngwanrọ Ndị mmadụ kweere na m na-ahapụ ihe ha na-achọ ire. M wee na-agbalị ịkọwa na anyị anaghị ere ngwanrọ, anyị na-ere ngwanrọ software. Ndị mmadụ adịghị akwụ anyị ụgwọ maka ngwanrọ ahụ, ha na-akwụ anyị ụgwọ maka ihe ha mere.
I kwuru na a na-eleghara software dị ukwuu anya, ihe ịma aka ndị ị na-eche ihu n'inweta mmasị?
Mee ka ndị mmadụ chọpụta na ihe kachasị mkpa bụ no.1. Ma nke ahụ bụ nanị mmalite nke egwuregwu ahụ. Mgbe ahụ, ha ga-egosipụta ya. Ha ga-enwe ajụjụ. Ha ga-enwe nsogbu. Ha ga-achọ ime mgbanwe. Ha ga-atụ aro echiche ndị ọzọ. Ịnwe ike ịzaghachi na ọkwa ndị a niile bụ ihe na-eme ka ọrụ mmeghe na-arụ ọrụ nke ọma.
Ngwa ngwanrọ mepere emepe ga-enweta usoro dị oke egwu tupu ndị mmadụ eche na ha bụ akụkụ nke nnukwu nsogbu. Ọ dịghị onye chọrọ ka ọ rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ha eche na ọ na-anwụ. Ịbụ onye na-emeghe emeghe apụtaghị na ndị mmadụ ga-esoro anyị magburu onwe ha ma ghọọ ndị ọrụ nke nje anyị. Anyị ga-eme ka nke ahụ mezuo.
Ọ na-amasịkarị m na mgbalị Google na ndị ọzọ tinyere n'ọrụ ha. Ha na-eme ihe na-emeghe, wee tinye otu ndị ahịa ka ha ree ya. Ọ bụrụ na ị jụọ ihe, mmadụ zara gị. Nsogbu ọ bụla i nwere, e nwere onye nọ n'ebe ahụ iji nyere gị aka, ọ bụghị mgbe niile site na isi mmalite na forums na ebe nrụọrụ weebụ. Ha nwere nnukwu ihe omuma atu nke ihe omuma atu. Ọ na-azụ onwe ya.
Were ya na ị na-ede ihe omume. Ọ bụrụ na ị gaghị ebipụta koodu ntinye gị, ọ nwere ike ịbụ ihe na-adịghị mma na mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ, rụọ ọrụ. Mana ọ bụrụ na ị ga-ekwu na ndị ọrụ nwere ike itinye ihe ndị dị n'elu ya, ma ọ bụrụ na ị ga-atụ aro na ọ bụ ebe ịbata maka ọrụ ndị ọzọ, ị ghaghị igosi na ọ bara uru oge ha. Ọ bụghị nzọụkwụ doro anya n'ihu. Afọ iri gara aga agara m ekwu; Enweghị ụzọ, ọ siri ike. Ma nchikota ya na akwukwo ndebanye aha iTwin na eziokwu nke ndi ozo maka uwa nke mepere emepe, putara na anyi nwere olile anya ime ya.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị ahụwo mmekorita ọnụ n'etiti ụlọ ọrụ kachasị elu, Bentley na Microsoft, Siemens na Topcon na-arụ ọrụ n'etiti ndị ọzọ, gịnị kpatara ya?
Ruo mgbe afọ ole na ole gara aga, ọ dịghị ihe ọ bụla anyị mepụtara. Ruo oge ụfọdụ, anyị kwuru na anyị na-anọpụ iche nakwa na anyị kwadoro onye ọ bụla n'otu. Ma Topcon na Siemens na ndị ọzọ bịara, ọ dị ka ihe nlereanya nke nwere ike ịrụ ọrụ; anyị abụọ ga-enweta uru. Mgbe ụfọdụ, anyị nwere arụmụka banyere ebe oke kwesịrị ịdị n'etiti ihe anyị na - eme na ihe ha kwesịrị ịkwụ ụgwọ / ole ha kwesịrị ịkwụ. Ma echere m na anyị abụọ dị mma karịa ma ọ bụrụ na anyị enweghị nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ.
N'ihe banyere Topcon, anyị na-arụ ọrụ ọnụ mgbe ọ dabara na ihe ndị anyị kwesịrị ibute ụzọ. Anyị na-agbalị mgbe nile ịkọwa ha ebe anyị na-aga, ka anyị wee ghara ịgafe. Ị pụghị ime nke ahụ na onye ọ bụla. Mmekọrịta pụrụ iche abụghịzi ihe pụrụ iche ma ọ bụrụ na ị nwere ụdị mmekọrịta ahụ na onye ọ bụla. Echiche nke nkwekọrịta nkwekọrịta, ebe anyị na-emekọrịta ihe ugbu a, aghọwo ihe nlereanya nke na-arụ ọrụ nke ọma. Agaghị m ebu amụma ya. N'eziokwu, abụghị m onye kwere ekwe n'echiche ahụ, mana enwere m obi ụtọ na ha nwere ike igosi na m ezighi ezi.
Dị ka onye nchoputa nke Bentley, olee ihe kachasị gị mma?
Anyị emeela 105 ahịa, ụfọdụ n'ime ha dịkwuo ogo ma ọ bụ karịa ogologo oge karịa ndị ọzọ. Ma, ihe anyị na-enweta ọtụtụ oge bụ ezigbo ndị mmadụ. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ anyị bịara site na ngwaahịa ndị a. Ọ bụrụ na ị bụ obere azụmahịa ma na-eme ka ụlọ ọrụ buru ibu karị, mgbe ahụ, enwere ụzọ abụọ ị nwere ike ịgbaso: gbasoro ụzọ gị ma laghachi na obere ụlọ ọrụ, ma ọ bụ hụ ohere. Anyị jisiri ike kwenye ụfọdụ ndị maara ihe ka ha nọrọ.
Anyị bụ njikọta nke ụlọ ọrụ 105 gbakọtara ọnụ kemgbe ọtụtụ afọ. Enwere m ike ịmalite ya, mana enweghị m ike ịnwe otuto dị ukwuu maka ihe anyị ghọrọ. Mgbe m nọdụrụ n'azụ ndị na-ege ntị ma lelee ngosi ngosi Synchro, nke a na-akpọ "Bentley Synchro," echere m na onwe m, nwoke, ụmụ okorobịa ahụ maara ihe. Anọ m n'ebube ya nke ebube ya. Enwere m otu ụzọ ahụ maka inweta Acute3D afọ ole na ole gara aga. Guysmụ okorobịa ahụ amaka. Ha kere ngwá ọrụ a magburu onwe ya. Anyị na-enweta ya. M na-ele ya anya, m na-agwa onwe m, damn ya, aha m dị n'ebe ahụ. Nke ahụ dị mma.
Kedu ka i chere banyere Bentley dị ugbu a?
Mgbe anyị bidoro, M gbalịrị ịnọgide na-azụ ahịa ruo ogologo oge iji kwụọ ụgwọ ahụ. N'otu oge, amaara m onye ọ bụla na-arụ ọrụ maka Bentley Systems. Amaara m ihe ha na-eme. Ọ maara ụmụ ya. Nke ahụ dị iche ugbu a. Anyị agbasabawo n'ime oghere nke nsogbu ndị na-abụghị ndị anyị chere na mmalite. Anyị agbasawo na ahịa ndị na-agaraghị abụ ahịa anyị. Ogologo anyị nwere nnọọ ike karịa na ọ gaara abụ ma ọ bụrụ na anyị etolitela na-eto eto. Kedu ihe bụ ụlọ ọrụ ịmalite Bentley? M na-arụ ọrụ maka DuPont, onye bụ onye ọrụ Integra. Nwanne m Barry malitere ụlọ ọrụ software ya, ahapụkwara m DuPont ka m rụọ ọrụ maka ya. Ka ọ dị ugbu a, DuPont gwara m ka m melite ngwanrọ m dere mgbe ọ na-arụ ọrụ n'ebe ahụ. Agwara m ha na m ga-emeziwanye ya ma ọ bụrụ na ha nyere m ikike ire ya. Nke ahụ bụ mmalite. M malitere Bentley Systems ma malite ire CAD software.
Anyị gbara ajụjụ ọnụ bụ Greg Bentley na 2016 wee jụọ ya ihe ọ dị ka ya na ụmụnne ya na-arụ ọrụ, olee otú ọ dị gị?
M gwara gị ka ị ghara ime ya! Ma ọ gbanwere nke ọma. Anyị enweghị atụmatụ zuru ezu. Mgbe anyị malitere ụlọ ọrụ ahụ, e nwere mmadụ ise n'ime anyị na-arụ ọrụ n'ebe ahụ n'oge ahụ, ụjọ jidere mama m. O nweghi ike ikwere na software di. I nweghị ike ikwu na ndị mmadụ ga-akwụ ụgwọ maka ihe ha na-eleghị. Ọ na-echegbu onwe ya nke ọma na ụmụ ya ise niile agaghị enwe ọrụ ma laghachi n'ụlọ.
Kedu ihe ị ga-atụ anya ka ọtụtụ si Bentley na 2019?
Echiche nke ejima ejiri dijital. Onye na-aga ime ya. Onye ọ bụla nke mepụtara ya nke ọma ga-enwe ohere karịa ahịa karịa ihe dị ugbu a. Uzo a, ihe omuma a n'ime ulo oru ebe enwere nnukwu mgbanwe n'etiti mba uwa nke di ugbu a na uwa ejima dijitalya bu ahia nke anyi kwesiri ijide ngwa ngwa. 2019 nwere ike ịbụ Afọ Otu maka anyị.
Anọ m ebe ahụ na mmalite ụbọchị kọmputa ahụ. Kọmputa ahụ dị ọhụụ, onye ọ bụla nọ na-atụgharị uche ya ihe ndị ọ ga-ekwe omume. Echere m na anyị na ụmụ ejima dijitalụ nọ n’ọnụ ụzọ mbido. Ọ bụghị echiche ọhụrụ, iwu na akụrụngwa bụ laggards na nke a. Ọ bụrụ na m lee anya n’otú azụmaahịa si amalite na 2018, ọ naghị adị iche na mgbe anyị malitere na 1984. Ee, anyị nwere akwụkwọ dijitalụ. Ee, anyị nwere ụdị 3D. Mana nkwekọrịta na-ekwu otu ihe ahụ, ndị mmadụ n'ozuzu na-ewukwa n'otu usoro usoro dị ka ọ dị na mbụ. Ihe dika Synchro bu ndi mgbanwe, ma ha anaghị eji ya. Na nke a na-esote, ọtụtụ ihe ga-adị iche.
Ihe ọ bụla nke na-apụta site na ohere ndị a na-eme na ụwa ejima dijitalụ, ga-abụ ụwa na-emepe emeghe. Ekwenyesiri m ike na ya. M ga-enwe ike ịlụ ọgụ na ya, ma anyị chọrọ ijide. Ọ dị mfe, mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 35, ịsị, Emewo m. Mana m na-eche na anyị nọ na nmalite nke agbụrụ nke ga-agbanye n'ime nchara ọla edo ọzọ.
Keith Bentley, Onye guzobere na CTO, Bentley Systems, na Darrell Smart na Abigail Tomkins na-akparịta ụka.
Previous Post«Previous Nwebatara ma ọ bụ mezuo eziokwu? Kedu nke ka mma iji chee ọrụ ngo?
Next Post Na-enyocha foto satịlaịtị ma wepụ nyocha iji LandviewerNext »